Maamulka Somaliland oo Kulan deg deg ah isugu yeeray & Ganacsatada oo ka biy…. – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA Maamulka Somaliland oo Kulan deg deg ah isugu yeeray & Ganacsatada oo ka biy….
Maamulka Somaliland oo Kulan deg deg ah isugu yeeray & Ganacsatada oo ka biy….
Posted on January 26, 2018 by admin | 0 Comments
Madaxtooyada Somaliland ayaa kulan deg deg ah iskugu yeertay ganacsatada deegaanadaas, gaar ahaana maalqabeenada la rumeysan yahay in ay bixin karaan Hantida ay hadda u baahan tahay Madaxtooyada oo ay ku galayso dagaalada ku furan.
Wasiiru dowlaha Madaxtooyada ee Somaliland ayaa casumay ganacsatadan, waxaana kulan adag oo ay wada yeesheen Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ka soo baxday in aan laysku afgaran wixii laga wada hadlayey.
Muuse Biixi ayaa u soo jeediyey ganacsatadu in ay bixiso lacag dhan 4 Malyan oo Dollar taas oo uu doonayo in uu ku galo dagaalka uga furan dhinaca gobalka Sool, ayna dib hadhaw u bixin doonaan lacagtaas.
Ganacsatada qaarkood wey diideen Sida ay ogaatay Puntland FM dalabka Xukuumada Muuse Biixi, waxayna u sheegeen in aysan aqbaleyn dagaal iyo dhib bulshada deriska ah loo horseedo waqtigan aysana qeyb ka noqon doonin dagaaladaas.
Dalabka Xukuumada ayay ku sheegeen in uu yahay mid muujinaya deg deg iyo maskaxda oo aan laga shaqeynin, meel dheerna laga raadin doono Somaliland isku duuban oo uu wareejiyey Madaxweynihii hore ee Axmed Siilaanyo. Waji gabax weyn ayuu la kulmay Muuse Biixi Cabdi oo hadda raadinaya dhaqaalihii uu ku maareyn lahaa dagaalka daba­dh